musha nyika dzakabatana Singers Lil Wayne Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yakakwana yeAmerica Celeb ine zita rezita “Dr Carter". Our Lil Wayne Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvakakurumbira kubvira paudiki hwake kusvika panguva.
Lil Wayne Yevacheche Nyaya.
Hongu, munhu wose anoziva iye ndeimwe yenguva dzose-kutengesa mimhanzi artists. Zvisinei, vashoma chete ndivo vanofunga Lil Wayne's biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Lil Wayne Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kubva, Dwayne Michael Carter Jr akazvarwa musi we 27th waSeptember 1982 kuNew Orleans muLouisana, USA Aiva mwana oga akaberekerwa kubatana pakati pababa vake, Dwayne Michael Turner uye amai vake, Jacida Carter.
Amai vaLil Wayne amai Jacida.
Nyika yeAmerica yerudzi rwevatema nemidzi yeAfro-America yaingova nemakore maviri chete vabereki vake pavakarambana. Kutevera kupatsanurwa, baba vaDwayne (baba vaWayne) vakasiya zvachose mhuri yavo, vachisiya iro basa rakaoma rekurera mwana Wayne kuna amai vake.
Lil Wayne aive mudiki zvakanyanya baba vake pavakasiya mhuri.
Amai vaWayne vakaenderera mberi vachimumutsira munzvimbo ine hurombo yeHollygrove yeNew Orleans kwaakakurira asina kambani ine rudo yehama nekuti aive asina yehudiki hwake uye kuyaruka.
Lil Wayne akakurira kuLouisiana muNew Orleans.
Kunyange zvakadaro, Wayne akave nehutano hwakanaka uye akatanga kufarira zvekare zvidzidzo kusanganisira runyora nekuita. Akanyora rap yake yekutanga se-8-year-old uye akabatanidza kuraira kwekuita panguva yechikoro chesekondari.
Lil Wayne Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Taura nezvekudzidziswa kwaWayne, aive nedzidzo yake yepuraimari kuLafayette Elementary School muNew Orleans. Iye rap prodigy anga achiri mudzidzi wechikoro apo kugona kwake kubvarura kwakabata pfungwa yemurapi uye muridzi weCash Money Records, Bryan Williams muna 1991.
Lil Wayne aive mudzidzi wepuraimari paakatanga kubhinya.
Bryan akasaina Wayne kuCash Money Records uko kwaakabatsirwa kusimudzira hunyanzvi hwekubvarura uye akaisirwa munziyo dzakapihwa Cash Mari Kwakazotevera kuita kwedzidzo akaona Wayne achienderera kuna Eleanor McMain Sekondari kwaaive nhengo inoshingairira yekirabhu yemutambo yechikoro.
Kuchikoro chesekondari, Lil Wayne aive nhengo yekirabhu yemutambo.
Pamusoro pezvidzidzo zvake, Wayne akadzidza kuMarion Abramson Senior High School apo akazobuda kundotarisa mumhanzi. Wayne aizozobhabhatidzwa kuYunivhesiti yeHouston mu2005. Zvisinei, rap prodigy yakaderera kunze kwegore iroro uye yakashandura kuYunivhesiti yePenieni apo yaive yakakurumbira muPsychology nekutora makirasi eInternet.
VERENGA Dr Dre Zvekuita Nyaya Yevacheche Plus Untold Biography Chokwadi
Lil Wayne Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Nhoroondo yebasa raWayne rekutanga mukubvarura yakadzokera ku1996 apo iye ane makore gumi nemana ekuberekwa akabatana neboka reAmerican Hip Hop, "Hot Boys" iyo yakaumbwa nevateereri vaiuya avo vakasainwa kuCash Money Records.
Lil Wayne nedzimwe nhengo dze "Hot Boys" boka.
NaWayne ari iye wekupedzisira nhengo ye "Hot Boys", iro boka rakaburitsa dambarefu raro "Get It How U Live!" mu1997 uye makore maviri gare gare (1999), buritsa huru-yechiratidzo yekutanga "Guerrilla Warfare" iyo yakawedzera machati emimhanzi uye yakasimbisa nhengo dzechipfeko setarisiro yekutarisisa muindasitiri yemimhanzi.
Lil Wayne Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Mugwagwa Mukurumbira Nhau
1999 raive gore iro ane makore 17-okuberekwa Wayne akaburitsa rwiyo rwake rwega roga "Tha Block Is Hot" nemipiro kubva kunhengo dzeboka re "Hot Boys". "Tha Block Iri Kupisa" akagashira kurumbidzwa kwakanaka kwakawanda uye akashanda senheyo yakasimba iyo Wayne aizovakira basa rake rekubvarura.
Lil Wayne Debut Album Kavha.
Nehurombo, akatevera maalbum akaburitswa naWayne anosanganisira "Mwenje Kunze" (2000) uye "500 Degreez" (2002) akakundikana kubva pane rake rekutanga albhu uye yega yega yakagamuchira kutsoropodzwa kwakapararira kwakaratidza musambo wekuridza murapi pamwe neasingawirirane. madingindira.
Lil Wayne Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Kumuka Mukurumbira Nhau
Achigadzirisa matambudziko emaalbum ake maviri apfuura, Wayne akaburitsa dambarefu rake rechina "The Carter" muzhizha ra2004. "Carter" yakaratidza budiriro yakakosha kuna Wayne munzira dzakawanda kwazvo.
Kutanga, iyo album yekuvhara art yakaratidza kudhara kweWayne izvozvi-siginecha dreadlocks pamwe nekubudirira mukutengeserana nekutengesa anopfuura 878,000 makopi muUnited States. Kunyanya zvakadaro, iyo yega "Go DJ" yakave yeTop 5 Hit pane iyo R & B / Hip-Hop chati uye yakachengetedza Wayne mukurumbira.
Lil Wayne akasimuka mukurumbira nekuburitswa kwake kwechina album "The Carter".
Lil Wayne Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Relationship Life Facts
Lil Wayne haana kuroorwa panguva yekunyora. Tinokuudza chokwadi pamusoro pekufambidzana kwake, chakakundikana muchato uye ikozvino hukama hwehukama. Kutanga nehukama hwake hwepamberi, Wayne akave nezvakawanda zvezviitiko zvemudiwa zvokuti akabatanidzwa nevakadzi ve22.
Nekudaro, vashoma chete ndivo vakasiya mamaki makuru pahukama hwake nguva yekumuberekera vana. Ivo vanosanganisira wehudiki waWayne mudiwa akachinja mudzimai, Antonia "Toya" Wright. Wayne naAntonia vakaroora muna Kukadzi 14, 2004. Vaive nemwanasikana, Reginae Carter (akazvarwa munaNovember 29, 1998) vasati vaparadzaniswa mu2006.
Lil Wayne akange akaroora Antonia pakati pa2004-2006.
Shure kwehukama hukama hunoona Wayne akabatana naOAP uye muveki Sara Vivan, chidimbu chinodikanwa chakaita kuti aberekwe dangwe rake, Dwayne Michael Carter 3 (akaberekwa muna October 22, 2008).
VERENGA Chris Brown Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Lil Wayne aive nerudo stint naSara Vivan.
Wayne zvakare akataura naLauren Nicole London uye Nivea B. Hamilton avo vose vakamuberekera vanakomana vake Cameron Lenox Carter (akazvarwa muna September 9, 2009) uye Neal Carter (akaberekwa November 30, 2009).
Vaimbova vasikana vaLil Wayne Lauren Nicole London (kuruboshwe) naNeal Carter (kurudyi).
Nezvehukama hwake hwehukama panguva yekunyora, Wayne ari kufambidzana nemusikana wake, Dhea Sodano. Mhirizhonga dzave dzichifambidzana kubva ku2011 apo makuhwa ane icho kuti ivo vaimbova muC2012. Chero chero nzira iyo makuhwa anowedzera, Dhea munhu chaiye uye haana kubuda kuzosimbisa kana kuramba mafungiro.
Lil Wayne nemusikana wake Dhea Sodano.
Lil Wayne Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri Zvechokwadi
Lil Wayne akauya kusvika kumusoro kubva kubva kumhuri yepasi-yemhuri kumashure. Zvino ngatikuunze chokwadi nezve hupenyu hwemhuri.
Nezve baba vaLil Wayne: Dwayne Michael Turner ndibaba vaWayne. Akasiya zvachose mhuri iyi paive naWayne aine makore maviri uye anga asati ambove muhupenyu hwemurapi. Nekuda kweizvozvo, Wayne ane chigumbu chikuru kuna baba vake uye akatodonhedza 'D' muzita rake rekuti "Dwayne" mukupikisa. Iye ega munhu waanoona sababa muhupenyu hwake aive baba vokurera, Reginald McDonald akatumidzwa zita rekuti Tsuro. Wayne akagovana hukama hwepedyo naTsuro asati aurayiwa.
Lil Wayne's aifarirwa nababa vake vokurera Reginald McDonald "Rabbit".
Nezve amai vaLil Wayne: Jacida Carter ndiamai vaDwayne. Akazvara Wayne apo aive 19-makore-ekuberekwa chikoro chesekondari. Jacida aishanda semubiki panguva yehupenyu hwaWayne achiri mudiki uye akaroorazve kaviri mushure mekunge baba vaDwayne vasiya mhuri. Akatanga kuroora mumwe Terry asati asunga banga naReginald McDonald akatumidzwa zita rekuti Rabbit uyo Dwayne aimuona sababa. Amai vanotsigira parizvino vakaroora murume wavo wechina, Avery Goff panguva yekunyora.
Lil Wayne naamai Jacida.
Nezve hama dzaLil Wayne: Lil Wayne haana hanzvadzi asi hama yehafu kubva kuna mai vake kudivi anonzi Semaj Carter. Semaj anotendwa zvakanyanya kuti akazvarwa naamai vaWayne kuroora kuna Avery Goff nekuda kwekuti iye ane makore matatu mudiki pane mwanasikana mukuru waWayne Reginae.
Lil Wayne nehafu-mukoma Semaj Carter.
Nezve hama dzaLil Wayne: Kure kubva kumhuri yepedyo yaWayne, zvishoma zvinozivikanwa nezvesekuru nasekuru vake pamwe nasekuru vake nasekuru naambuya. Saizvozvo, hapana marekodhi amaiguru vake, babamunini, babamunini uye vazukuru nepo babamunini vake vasina kuzivikanwa muzviitiko zvinozivikanwa zveupenyu hwake hwepakutanga kusvika zvino.
Lil Wayne Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Personal Life Facts
Chii chinoita kuti Lil Wayne afare? Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kugadzirwa kwehunhu hwake kukubatsira iwe kuti uve nemuzere mufananidzo wake. Kutanga, Lil Wayne's persona isanganiswa yeRibra Zodiac Traits.
VERENGA R Kelly Childhood Story Zvimwe Untold Biography Facts
Ari kugadzira, akachenjera, ane hanya zvikuru, anoshamwaridzana nevanhu uye haaine dambudziko nekuzarura mashoko pamusoro pehupenyu hwake uye hwega. Zvaanoda uye zvinokuvaraidza zvinosanganisira kusvuta, kushamwaridzana neshamwari, kugovera mabhuroji uye kupedza nguva nemhuri yake.
Kuparadzanisa ndeimwe yeanofarira kuita Lil Wayne.
Lil Wayne Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Lifestyle Facts
Lil Wayne ane mari inofungidzirwa kuti inokosha kudarika $ 120 Million panguva yekunyora. Mhedzisiro yeupfumi hwake inobva pamabasa ake emimhanzi apo kuongororwa kwekushandisa kwake maitiro kunoratidza kuti anorarama mararamiro anogutsa.
Kuratidza zviratidzo zvehupenyu hwake hwehupfumi kunosanganisira kuva neimba zhinji dzimba dzinosanganisira imba yeMiami inokwana $ 14 mamiriyoni. Imba yakakosha iyo iri pamhenderekedzo yeAtlantic kumaodzanyemba-kumabvazuva kweFlorida inowanzova nemakamuri akawanda akaisvonaka, gorosi yepamusoro, gungwa guru rokushambira uye nzvimbo yakawanda yegungwa kwechikepe chekidiki.
Chikamu chemaonero eimba yaLil Wayne's Miami Beach.
Taura nezvemakumbo ake, zvakakosha kuona kuti Lil Wayne ane imwe yekutengesa motokari inodhura zvikuru munyika yose. Zvimwe motokari dzake dzinogadzirwa nemhando dzakadai seBugatti, Rolls Royce pakati pevamwe.
Lil Wayne anotumira naRoll Royce wake.
Lil Wayne Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Untold Facts
Kuvhara nhau yedu yeLid Wayne yehuduku pano ichokwadi izvo zvisingawanzobatanidzi muhupenyu hwake.
Wayne anopa baba-mwanakomana ukama nemuridzi weCash Money Records, Bryan Williams anozivikanwawo seBirman. Zvingave zvisingakoshi kuona kuti duo inongova nemakore 13 yemakore yakasiyana.
Lil Wayne ane hukama hwababa-mwanakomana naBirdman.
Akaedza kuzviuraya paakanga akwegura 12 nokuzviputira ne 9 mm handgun. Nenzira yakanaka, mumwe mupurisa asina kukodzera Robert Hoobler akauya kumubatsira uye akakurumidza kuenda naye kuchipatara.
Murape uyo ane mazita akawanda kwazvo, akaisa mazino emadzinza akaiswa mahara madhora emadhora e150k.
Lil Wayne anoratidzira mazino ake edhaimani uye akawanda maTatoo.
Nezve chitendero chake, Wayne anozviti muRoma Katurike uye anonzi anoverenga Bhaibheri rake nguva dzose. Kunyanya zvakadaro, akataura kuti anotenda "muna Mwari nemwanakomana Wake, Jesu." panguva yekushanya kwa2011 naEminem.
Mukutsvaga kwake kukuru mumimhanzi kunosanganisira kuva nekodhi yechinyorwa, Young Money Entertainment. Kunze kwemimhanzi Wayne ane chikwata chembatya yezita rekuti "Turk akakodzera" uye anorova headphones line.
Mufananidzo waLil Wayne panotangwa mbatya dzake.
Wayne anorema kusvuta uye kunwa kuti anonzi akave akakwirira munguva yekubvunzurudza.
Lil Wayne Childhood Story Plus Untold Biography Facts: Video Summary
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Lil Wayne Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At childhood biography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Tumira Malone Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi